Fantaro i Aremu A. Adeola, Jr., ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter-n’ny @DigiAfricanLang Twitter ny 2 – 8 Oktobra · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Aremu A. Adeola, Jr., ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter-n'ny @DigiAfricanLang Twitter ny 2 – 8 Oktobra
Voadika ny 02 Oktobra 2019 6:23 GMT
Sary natolotr'i Aremu A. Adeola, Jr.
Ny taona 2019, ho fandraisana anjara amin'ny fanentanana an-tambajotra sosialy mba hankalazana ny hamaroam-piteny ety anaty aterineto, hifandimby hitantana ny kaonty Twitter-n'ny @DigiAfricanLang ireo Afrikàna mpikatroka sy mpiaro ny teny mba hizarana ireo traikefany tamin'ny resaka fanomezana aina vao sy fampiroboroboana ireo teny Afrikàna. Mikasika an'i Aremu A. Adeola, Jr. (@aremuadeolajr) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy ity lahatsoratrana fampahafantarana ity.
Aremu Anuoluwapo Adeola jr. no anarako, ary mpianatra taona voalohany ao amin'ny Departemanta momba ny teny, ny fianarana momba an'i Afrika sy Azia, ao amin'ny oniversite ao Lagos. Izaho no mpamorona ny lalao teny mifampiditra voalohany amin'ny fiteny teratany afrikàna, YOOBA LINGO. Mianatra asa ihany koa ao amin'ny Yorubaname.com toy ny mpirakitra voambolana no sady koa mpanorina ny “Aremu Language Consult”.
RV: Manao ahoana ny toeran'ny teninao ankehitriny ao amin'ny Aterineto sy ivelan'ny tambajotra?
Manomboka manana ny sata salantsalany ny fiteny Yoruba ety anaty tambajotra, miaraka amin'ny fisian'ireo fitaovana isankarazany sy ny fifampiresahana atao amin'io fiteny io eny anaty sehatra media sôsialy isankarazany sy koa ny fahitàna ireo tanora miezaka mitondra anjara biriky amin'ny fitahirizana ilay fiteny amin'ny alàlan'ny aterineto dia tena tsy mampino sy mendrika hoderaina.
Lafatra hatrany ilay fiteny rehefa ivelan'ny aterineto, noho ny fisian'ireo fitaovana marobe momba ilay fiteny sy koa ireo tahirinkevitra mifanandrify tsara iresahana ny kolontsaina sy ny fombandrazana. Rehefa voalaza izay, mbola misy koa zavatra maro hafa aro atao anaty tahirinkevitra. Mbola marobe ny zavatra tokony hokitihanay.
Mbola betsaka ny zavatra tokony hataonay, saingy azonay antoka aloha izao hoe aiza ho aiza no misy anay. Mandroso amin'ny fomba rehetra ilay fiteny.
RV: Lohahevitra inona no tianao hifantohana mandritra ny herinandro hitantananao ny kaonty Twitter-n'ny @DigiAfricanLang ?
Hafantoko amin'ny resaka Fanelezampeo amin'ilay fiteny (ny fomba firesaka politika sy zavatra hafa vitsivitsy) sy izay fiantraikany amin'ny fanapariahana ny filàna. Tiako ny hiresaka momba ireo tarehimarika sy ny anarana amin'ny fiteny Yoruba, ny politika momba ny teny, ary ny fametrahana izany ao Nizerià ary ny fomba fiantraikany amin'ny fiteny Yoruba. Ny literatiora sy ny hira vakodrazana Yoruba koa ankoatra ny zavatra maro hafa.
RV: Inona no tena mandrisika anao hanao fikatrohana nomerika ho an'ny teninareo? Ny fanantenana sy ny nofinofinao ho amin'ny fiteninareo?
Ny zotompo mba hiantohana hoe hitety ny tontolo ilay fiteny, indrindra fa eny anivon'ireo Yoruba mpiteny teratany any am-pielezana, no hery iray tena manosika ahy hirotsaka amin'ny fikatrohana nomerika. Ny aterineto, indrindra fa ny media sôsialy, dia fitaovana iray goavana hahafahana manantanteraka izany.
Midadasika be raha ny nofinofiko ho an'ilay fiteny, tiako ny hahita ny fiteny Yoruba tsy ho levona ka hofehezin'ireo tanora tahaka ny fifehezan-dry zareo ny teny anglisy. Ilain'ny governemantanay ny manao bebe kokoa amin'ny resaka fametrahana politika momba ny teny.